Filtrer les éléments par date : samedi, 24 juillet 2021
samedi, 24 juillet 2021 09:37
Mpiasan’ny INSTAT : Miantso vonjy amin’ny faratampon’ny fitondrana
Miantso vonjy amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Ntsay Christian ireo mpiasa “de droit privé” ao amin’ny ivontoeram-pirenena misahana ny antontanisa (INSTAT).
Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo.
Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra.
Nolazain’ny mpitantana eny anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola (MEF) fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny praiminisitra ny fanapahana mikasika izany.
Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa.
samedi, 24 juillet 2021 09:28
Fahasalamam-bahoaka : Nopotehina ireo sisam-baksiny covishield tsy nampiasaina
Notanterahina ny zoma 23 jolay 2021 ny fandorana sy famotehana ireo ambina vaksiny tsy nampiasaina, na koa ireo izay nampiasaina nefa tsy lany ny tavoahangy, nandritra ny fanaovam-baksiny iarovana amin'ny Covid-19, andiany voalohany, izay notanterahina ny 10 May hatramin’ny 17 Jona 2021 lasa teo.
Natao izao fandorana izao mba ho azo antoka fa tsy hisy hampiasa intsony ireo vaksiny rehetra ireo. Aorian’ny fanapotehana sy fandorana ireo tavoahangy dia ho ampiasaina ny potik’ireo tavoahangy ireo hanamboarana « pavé autobloquant ».
Ho avy amin’ny fiandohan’ny volana aogositra 2021 ireo andiam-bakisiny faharoa, izay ahitana karazam-baksiny hafa.
samedi, 24 juillet 2021 09:26
Lalao olimpika : Nisokatra any Tokyo
Tanterahina nanomboka ny zoma 23 jolay any Tokyo renivohitr’i Japana ny Lalao olimpika 2020. Hitohy hatramin’ny 8 aogositra 2021 io.
Manana atleta hiaro ny voninam-pirenena i Madagasikara.
samedi, 24 juillet 2021 08:37
Alahonko : Omen-danja manokana ao Mahajanga
Tanterahina any Mahajanga ny 23 ka hatramin'ny 26 jolay 2021 izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny alahonko na ny "mangroves". Mitondra ny Lohahevitra : « Restauration des Mangroves au profit des générations présentes et futures ».
Tanjona amin'ity hetsika ity ny fifampiresahana eo amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra manodidina ny alahonko, indrindra ny vondron'olona ifotony.
Haseho mandritra ity hetsika ity avokoa ireo voka-pikarohana rehetra manodidina ny alahonko, ary mpikaroka maro no handray anjara amin'izany.
Hisongadina amin’izany ny voka-pikarohan’ireo Ecoles doctorales toa ny ISSEDD Toamasina sy ny EDEN Mahajanga mahakasika ny alahonko.
samedi, 24 juillet 2021 08:17
Don-dresaka TVplus alahady 25 jolay 2021 amin'ny 18h30
Mankasitraka an'i Abraham Razafy sy Sibella Randriamazava ary ireo teknisianina sy tompon'ny Orinasa TVPlus nanasa.
Lohahevitra : Toe-karena, famatsiam-bolan'ny Banky iraisam-pirenena 1 miliara dolara, ny fikasana hamono ny Filoham-pirenena.
Misaotra ireo mpandray anjara, izay nisy fifanajana tanteraka, na dia mafimafy ihany aza ny dona sy ny ady hevitra.
Mpandray anjara :
- Questeur Jean Michel Henri, Solombavambahoaka voafidy tany Ambovombe
- Tale Jeneralin'ny Tetikasan'i filoham-pirenena DGPP Augustin Andriamananoro
- Patrick Andriamahefa, mpanao gazety, mpamakafaka politika
- Patrick Raharimanana, Filohan'ny Vitatsika io